Blue moon နှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအနှုန်းများ - Myanmar Network
Blue moon နှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအနှုန်းများ
Posted by Soe Soe Win on August 4, 2015 at 12:26 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ သောကြာနေ့ဟာ မြန်မာအပါအဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေအတွက် ဘာသာရေး အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဝါဆိုလပြည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ဟာဘဲ အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအတွက် blue moon နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Blue moon ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ “once inablue moon” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ” (ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထသိပ်မရှိဘူး) ဆိုတာဘဲ။ ဒီ expression က blue moon ဆိုတဲ့ ဒီလပြည့်ည ကနေ ပေါက်ဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပြက္ခဒိန်တွေမှာ လ တစ်လကို လပြည့်ညက တစ်ကြိမ်သာ ကျရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လရဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာတော့ တစ်လထဲမှာ လပြည့်ည ၂ ကြိမ် ကျရောက်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့တုန်းကလည်း လပြည့်နေ့ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့လည်း သတိထားမိမှာပါ။ အဲ့ဒီ ဒုတိယ လပြည့်ညမှာ ပေါ်ထွက်တဲ့လကို “blue moon” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လူသားတွေ တွက်ချက်ပြီး ပြုစုထားတဲ့ ပြက္ခဒိန် human calendar နဲ့ လရဲ့ လည်ပတ် မှုပြက္ခဒိန် lunar calendar တို့ဟာ တစ်ထပ်တည်းမကျတတ်တာမို့ ၃ နှစ်လောက်ကို တစ်ကြိမ်ခန့် လ တစ်လထဲမှာ လပြည့်ည ၂ ခါ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ လူတွေပြုစုထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်မှာ တစ်နှစ်ကို ၃၆၅.၂၄ ရက်ရှိပြီး lunar calendar လပြက္ခဒိန်မှာတော့ တစ်လကို ၂၉.၅၃ ရက်တာရှိတာမို့ ၁၂ လမြောက်တိုင်းမှာ လပြက္ခဒိန်မှာ ၁၁ ရက် ပိုလျှံနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၃ နှစ်ခန့်အကြာမှာရက် ၃၀ ကျော်ပိုနေတဲ့အတွက် လပြည့်ည အပိုတစ်ခု ဖြစ်လာရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး Blue moon နေ့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ် ၂၀၁၂ သြဂုတ်လတုန်းက တစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ကတော့ ၂၀၁၈မှာ ဖြစ်ဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Blue moon ဆိုတဲ့အမည်အတိုင်းဘဲ သာမာန်လပြည့်နေ့တွေမှာ တွေ့နေကျ ပုံစံထက် ရှားပါးတဲ့၊ ပုံမှန်ထက် အရွယ်ပိုကြီးကာ ပိုပြီးလဲ တောက်ပနေတဲ့ super moon ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာနဲ့ အနီးဆုံးကို ရောက်ရှိလာတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လအရောင်ကတော့ အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် အပြာရောင် Blue moon လို့ခေါ်ရတာလဲ။
ဒီစကားဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ ရာစု ကတည်းက စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းပညာရှင် Phillip Hiscock ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ တတိယမြောက် ဟင်နရီဘုရင် Henry III ရဲ့ အပါးတော် အတိုင်ပင်ခံအမတ်ကြီး Cardinal Thomas Wolsey က ဘုရင်ကြီးအနားမှာ ခစားနေကြတဲ့ အခြားသော အမတ်မင်းများရဲ့ ဥာဏ်များလှည့်စားတတ်ပုံကို သတိပေးရင်း “They would have you believe the moon is blue.” (အရှင်မင်းကြီးကို လမင်းကြီးက အပြာရောင်ပါလို့ မြင်လာအောင် လှည့်စားပြောဆိုကြလိမ့်အံ့။) ဆိုပြီးရေးသားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၈၈၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းစာပေတွေမှာတော့ ဒီစကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး absurdity (မဖြစ်နိုင်တာတွေ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကနေ infrequency (ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ) ဆိုတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ - I have not seen you inablue moon. (မတွေ့ရတာ ကြာလှပေါ့။)
ပြီးခဲ့တဲ့ လပြည့်ညက အပြာရောင်တောက်ပနေတဲ့ blue moon ကြီးကို မျှော်လင့်တကြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးမှ အဖြူရောင်ဘဲ ဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရလို့ စိတ်ပျက်နေသူတွေအတွက် သီးခြား သတင်းတစ်ခုကတော့ NASA သိပ္ပံဌာနက မကြာခင်က အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့ blue-hued moon ဆိုတဲ့ လ အသစ်နောက်တစ်စင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က မီးတောင်တွေဟာ အာကသထဲကို ပြာမှုန့်တွေ မှုတ်ထုတ်နေလို့ အပြာရောင်လွှမ်းနေတဲ့ လတစ်စင်းဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီ link မှာ ဝင်ဖတ်ပါလေ။
Some Examples with blue moon expressions:
I don’t know why she bought that music system – she used it once inablue moon. (very rarely) (သူဘာလို့ ဒီ music system ကို ဝယ်လိုက်တာလဲ မသိဘူး။ တကယ့်ကို တစ်ခါတစ်လေမှ သုံးတာ။)
Once inablue moon, they phone or send an email. (seldom) (သူတို့ ရံဖန်ရံခါ ဖုန်းပြောကြသည်။ အီးမေးပို့ကြသည်။)
Jill: Does your husband ever bring you flowers? Ellen: Once inablue moon. (seldom) (နင့်ယောကျာ်းက ပန်းတွေဘာတွေ ဝယ်ပေးဖူးလား။ ဆယ်ခါရံမှ တစ်ခါပေါ့။)
Once inablue moon, I buyafashion magazine, just to see what people are wearing. (seldom) (တစ်ခါတစ်လေတော့ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းဝယ်ဖြစ်တယ်။ လူတွေ ဘာတွေများ ဝတ်နေကြလဲဆိုတာ သိအောင်ပါပဲ။)
Once inablue moon I havealittle wine with dinner. (rarely) (တစ်ခါတစ်လေတော့ ညစာစားရင်း ဝိုင်သောက်ဖြစ်တယ်။ အကြာကြီးနေမှ တစ်ခါပါ။)
My sister lives in Alaska, so I only get to see her once inablue moon. (very rarely) (ကျွန်တော့်ညီမက အလာစကာ (ပြည်နယ်) မှာ နေတော့ တော်ရုံတန်ရုံ သူ့ကို မတွေ့ရဘူး။)
I don't know why I bought that CD-ROM for my computer - I only ever use it once inablue moon. (very rarely) (ကျွန်ပျူတာအတွက် CD-ROM ကို ဘာလို့ ဝယ်လိုက်မိမှန်းမသိပါဘူး။ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါ လောက်ပဲ သုံးဖြစ်တာကို။)
Once inablue moon I'll haveabeer with friends, but it's not my regular drink. (almost never) (တစ်ခါတစ်လေတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘီယာသောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ပုံမှန်ဆို ဘီယာ မသောက်ပါဘူး။)
(examples from idioms.thefreedictionary.com)
Qz.com မှ Matt Gibbons ၏ Today isablue moon: What does that really mean, anyway? ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုငျလ ၃၁ ရကျနေ့ သောကွာနဟေ့ာ မွနျမာအပါအဝငျ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျနိုငျငံတှအေတှကျ ဘာသာရေး အထှတျအမွတျထားရာ ဝါဆိုလပွညျ့နေ့ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီနဟေ့ာဘဲ အခွားကမ်ဘာ့နိုငျငံတှအေတှကျ blue moon နလေ့ညျး ဖွဈပါတယျ။ Blue moon ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
အင်ျဂလိပျစကားမှာ “once inablue moon” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးရှိပါတယျ။ အဓိပ်ပါယျကတော့ “ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲ” (ဖွဈလဖွေ့ဈထသိပျမရှိဘူး) ဆိုတာဘဲ။ ဒီ expression က blue moon ဆိုတဲ့ ဒီလပွညျ့ည ကနေ ပေါကျဖှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ပွက်ခဒိနျတှမှော လ တဈလကို လပွညျ့ညက တဈကွိမျသာ ကရြောကျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုငျလရဲ့ ပွက်ခဒိနျမှာတော့ တဈလထဲမှာ လပွညျ့ည ၂ ကွိမျ ကရြောကျခဲ့လို့ပါဘဲ။ ဇူလိုငျလ ၁ရကျနတေု့နျးကလညျး လပွညျ့နဆေို့တာ စာဖတျသူတို့လညျး သတိထားမိမှာပါ။ အဲ့ဒီ ဒုတိယ လပွညျ့ညမှာ ပျေါထှကျတဲ့လကို “blue moon” လို့ ချေါပါတယျ။ လူသားတှေ တှကျခကျြပွီး ပွုစုထားတဲ့ ပွက်ခဒိနျ human calendar နဲ့ လရဲ့ လညျပတျ မှုပွက်ခဒိနျ lunar calendar တို့ဟာ တဈထပျတညျးမကတြတျတာမို့ ၃ နှဈလောကျကို တဈကွိမျခနျ့ လ တဈလထဲမှာ လပွညျ့ည ၂ ခါ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။ လူတှပွေုစုထားတဲ့ ပွက်ခဒိနျမှာ တဈနှဈကို ၃၆၅.၂၄ ရကျရှိပွီး lunar calendar လပွက်ခဒိနျမှာတော့ တဈလကို ၂၉.၅၃ ရကျတာရှိတာမို့ ၁၂ လမွောကျတိုငျးမှာ လပွက်ခဒိနျမှာ ၁၁ ရကျ ပိုလြှံနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၃ နှဈခနျ့အကွာမှာရကျ ၃၀ ကြျောပိုနတေဲ့အတှကျ လပွညျ့ည အပိုတဈခု ဖွဈလာရပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး Blue moon နဟေ့ာ လှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈ ၂၀၁၂ သွဂုတျလတုနျးက တဈကွိမျဖွဈခဲ့ပွီး နောကျတဈကွိမျကတော့ ၂၀၁၈မှာ ဖွဈဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Blue moon ဆိုတဲ့အမညျအတိုငျးဘဲ သာမာနျလပွညျ့နတှေ့မှော တှနေ့ကြေ ပုံစံထကျ ရှားပါးတဲ့၊ ပုံမှနျထကျ အရှယျပိုကွီးကာ ပိုပွီးလဲ တောကျပနတေဲ့ super moon ကိုတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကမ်ဘာနဲ့ အနီးဆုံးကို ရောကျရှိလာတာမို့ ဖွဈပါတယျ။ လအရောငျကတော့ အဖွူရောငျဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ဘာကွောငျ့ အပွာရောငျ Blue moon လို့ချေါရတာလဲ။
ဒီစကားဟာလှနျခဲ့တဲ့ ၁၆ ရာစု ကတညျးက စတငျပျေါပေါကျခဲ့တယျလို့ သမိုငျးပညာရှငျ Phillip Hiscock ကဆိုခဲ့ပါတယျ။ တတိယမွောကျ ဟငျနရီဘုရငျ Henry III ရဲ့ အပါးတျော အတိုငျပငျခံအမတျကွီး Cardinal Thomas Wolsey က ဘုရငျကွီးအနားမှာ ခစားနကွေတဲ့ အခွားသော အမတျမငျးမြားရဲ့ ဉာဏျမြားလှညျ့စားတတျပုံကို သတိပေးရငျး “They would have you believe the moon is blue.” (အရှငျမငျးကွီးကို လမငျးကွီးက အပွာရောငျပါလို့ မွငျလာအောငျ လှညျ့စားပွောဆိုကွလိမျ့အံ့။) ဆိုပွီးရေးသားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၁၈၈၀ ခုနှဈအစောပိုငျးစာပတှေမှောတော့ ဒီစကားရဲ့ အဓိပ်ပါယျက တဈဖွညျးဖွညျး ပွောငျးလဲလာခဲ့ပွီး absurdity (မဖွဈနိုငျတာတှေ) ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျကနေ infrequency (ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲ) ဆိုတဲ့ဘကျကိုပွောငျးလဲခဲ့ပါတယျ။
ဥပမာ - I have not seen you inablue moon. (မတှရေ့တာ ကွာလှပေါ့။)
ပွီးခဲ့တဲ့ လပွညျ့ညက အပွာရောငျတောကျပနတေဲ့ blue moon ကွီးကို မြှျောလငျ့တကွီး စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ပွီးမှ အဖွူရောငျဘဲ ဖွဈနတောတှလေို့ကျရလို့ စိတျပကျြနသေူတှအေတှကျ သီးခွား သတငျးတဈခုကတော့ NASA သိပ်ပံဌာနက မကွာခငျက အသဈတှရှေိ့ထားတဲ့ blue-hued moon ဆိုတဲ့ လ အသဈနောကျတဈစငျး ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီလရဲ့ မကျြနှာပွငျပျေါက မီးတောငျတှဟော အာကသထဲကို ပွာမှုနျ့တှေ မှုတျထုတျနလေို့ အပွာရောငျလှမျးနတေဲ့ လတဈစငျးဖွဈနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အသေးစိတျသိခငျြရငျ ဒီ link မှာ ဝငျဖတျပါလေ။
I don’t know why she bought that music system – she used it once inablue moon. (very rarely) (သူဘာလို့ ဒီ music system ကို ဝယျလိုကျတာလဲ မသိဘူး။ တကယျ့ကို တဈခါတဈလမှေ သုံးတာ။)
Once inablue moon, they phone or send an email. (seldom) (သူတို့ ရံဖနျရံခါ ဖုနျးပွောကွသညျ။ အီးမေးပို့ကွသညျ။)
Jill: Does your husband ever bring you flowers? Ellen: Once inablue moon. (seldom) (နငျ့ယောကျြားက ပနျးတှဘောတှေ ဝယျပေးဖူးလား။ ဆယျခါရံမှ တဈခါပေါ့။)
Once inablue moon, I buyafashion magazine, just to see what people are wearing. (seldom) (တဈခါတဈလတေော့ ဖကျရှငျမဂ်ဂဇငျးဝယျဖွဈတယျ။ လူတှေ ဘာတှမြေား ဝတျနကွေလဲဆိုတာ သိအောငျပါပဲ။)
Once inablue moon I havealittle wine with dinner. (rarely) (တဈခါတဈလတေော့ ညစာစားရငျး ဝိုငျသောကျဖွဈတယျ။ အကွာကွီးနမှေ တဈခါပါ။)
My sister lives in Alaska, so I only get to see her once inablue moon. (very rarely) (ကြှနျတေျာ့ညီမက အလာစကာ (ပွညျနယျ) မှာ နတေော့ တျောရုံတနျရုံ သူ့ကို မတှရေ့ဘူး။)
I don't know why I bought that CD-ROM for my computer - I only ever use it once inablue moon. (very rarely) (ကြှနျပြူတာအတှကျ CD-ROM ကို ဘာလို့ ဝယျလိုကျမိမှနျးမသိပါဘူး။ တဈခါ၊ နှဈခါ လောကျပဲ သုံးဖွဈတာကို။)
Once inablue moon I'll haveabeer with friends, but it's not my regular drink. (almost never) (တဈခါတဈလတေော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဘီယာသောကျဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောက ပုံမှနျဆို ဘီယာ မသောကျပါဘူး။)
Qz.com မှ Matt Gibbons ၏ Today isablue moon: What does that really mean, anyway? ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Yeyint Naing on August 4, 2015 at 18:49
I want to know what is blue night
Permalink Reply by Aung Win Naing on August 5, 2015 at 13:19
It's really notable.
Permalink Reply by Miss Xandra on August 5, 2015 at 17:05
Permalink Reply by Ko Than Win Kyaw on August 5, 2015 at 20:18
Permalink Reply by Nyein Chan Maung on August 6, 2015 at 6:52
Permalink Reply by thantzin on August 6, 2015 at 10:38
Great and Noted it.
Permalink Reply by Aye Ko on August 7, 2015 at 1:17
Permalink Reply by Zin Mar Aye on August 10, 2015 at 12:20
Permalink Reply by Khing Wai on August 16, 2015 at 1:26
Permalink Reply by cherryeino on August 26, 2016 at 10:12